यी हुन् सरकारी जागीर छाडेर भागेका पाँच सेलिब्रेटी : जस्ले ब्रिटिस आर्मीको जागिर पनि चट्टक्कै छोडेर कलाकारितामा लागे ! – cafeguff
यी हुन् सरकारी जागीर छाडेर भागेका पाँच सेलिब्रेटी : जस्ले ब्रिटिस आर्मीको जागिर पनि चट्टक्कै छोडेर कलाकारितामा लागे !
एउटा भनाई छ, तिहुन मीठो तरकारी, जागीर राम्रो सरकारी । अर्थात सरकारी जागिर भयो भने जीवन भरलाई ढुक्क हुन्छ । सरकारी जागिर नभएको मान्छेको के भर ? सरकारी जागिर भयो भने बुढेसकालमा पेनसन आउँछ ।
काम नगरी खान पाईन्छ भन्ने धेरैको धारणा छ । त्यसमाथि सेनामा काम गर्नेको शान र इज्जत समाजमा बेग्लै हुन्छ । प्राय मानिसहरु सरकारी जागिर भनेपछि मरिरहत्ते नै गर्छन् । सरकारी जागिर खानका लागि लोकसेवाको परीक्षाको फर्म भर्नेको आँकडा हेरेमात्रै पनि पुग्छ सरकारी जागिरको क्रेज । तर सबैलाई सरकारी जागिर मन पर्छ भन्ने छैन । कतिले सुरुमा लहै लहैमा सरकारी जागिर खाएका हुन्छन् र पछि विविध कारणले छाडेका पनि हुन्छन् । आज हामी यस्तै सरकारी जागिर विशेष गरी सेनामा काम गरेर छाडेका कलाकारहरुको बारेमा एक सामाग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ ।
अर्जुन घिमिरे (पाँडे):
धिरेन शाक्यले नेपाली सिनेमामा झण्डै तीन दशक जति बिताई सकेका छन् । पाल्पामा जन्मेका धिरेनले पनि अभिनयका लागि ब्रिटिश आर्मीको जागिर छाडेका थिए । उनी आफू आर्मीमा हुँदा खेरीको कुरा सम्झेर भन्छन्, ‘त्यतिबेला जोश थियो , उमेर थियो, त्यस कारण म गएँ । तर पछि मलाई त्यो जीवन मन परेन । अनि म छाडेर कलाकारितामा लागेँ । मैलै राजीनामा दिएर छोडेको पनि होईन तर कलाकारितामा आउन लेखेको रहेछ त्यहि भएर मैलै छाडेँ जस्तो अहिले लाग्छ ।’ उनी आर्मीबाट फर्किएर आएपछि साथीहरुको हौसला र सहयोगले सिनेमामा लाग्ने सोच बनाएका थिए । उनलाई निर्देशक बसन्तजंगले सिनेमाको ढोका खोलिदिएका थिए भने चेतन कार्कीले ब्रेक दिएका थिए । जुन कुरा उनी कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन् ।
समचार • समाचार
धानको बीउमा किसानलाई अलमल
‘नेपाली हेलिकप्टर कम्पनीले लुटे’ भन्दै उद्धार मागेपछि लुक्लामा फसेका भारतीय नागरिकलाई शुष्मा स्वराजले यसरी गरिन् उद्धार
१ हजार रुपियाको लागि बोक्सीको आरोप लगाई मलमुत्र खुआएर दलित भन्दै ३२ बर्सिय लक्ष्मी परियारको हत्या – भिडियो हेर्नुहोस
नेपाली इतिहासको सबैभन्दा राम्रो चलचित्र बनाए खगेन्द्रले चारैतिर तारिफ (भिडियो)-